Waalidiintu xuquuqda ay leeyihiin iyo waajibaadyada saaran - Lastensuojelu.info
Finland si sinnaan leh bay xuquuqda iyo waajibaadku u saameeyaa waalidka. Waalidku waxay xuquuq u leeyihiin waajibna ku ah inay daryeelaan nolosha wanaagsan ee carruurtooda. Waalidka xilka saaran waa inay ilmahooda ku daryeelaan oo ku barbaariyaan deegaan leh nabadgelyo iyo waxay ku madadaashaan, waa inay ilmaha u suurageliyaan inuu helo waxbarasho isaga ku haboon. Finland barbaarinta ilmaha lama isticimaali karo edeb barid dilitaan jir ahaaneed ah iyo nooc walboo jirdil oo loo geysto ilmaha waa denbi. Ilmaha waa in la barbaariyaa isagoo helaya in la fahmo, nabadgelyo iyo jacayl u muujin.
Waalidku mar walba xaq bay u leeyihiin, inay fikradooda ka dhiibtaa waxqabadyada badbaadada carruurta. Mararka qaar waxqabadyada badbaadada carruurtu waa kuwo waalidku aanay fikrad ahaan raalli ka ahayn. Sharciga ayaa qeexaya markay tahay, in arrinta laga gaaro go’aan offishal ah iyo qofka go’aanka gaari kara. Sharciga ayaa sidoo kale sheegaya, in go’aamada la gaarey laga dacwoon karo oo la dalban karo in la beddelo. Tusaale ahaan go’aanka ku saabsan la wareegidda ilmaha ama go’aanka ku saabsan meelaynta degdegga ah ee ilmuhu waa go’aamay ay waalidku xaq u leeyihiin inay ka dacwoon karaan oo dalban karaan in la beddelo. Marka go’aanka la ogaado ka dib waa in dacwada go’aanka laga dacwoonayo (cabasho) lagu sameeyaa 30 maalmood gudohood. Shaqaalaha maamulka waxaa waajib ku ah, inay waalidka u sheegaan xuquuqda ay waalidku leeyihiin. Hadday waalidku u arkaan in si khalad ah loola dhaqmay, waxay xaq u leeyihiin inay la xiriiraan qofka ah wakiilka arrimaha bulshada ee degmada (kunnan sosiaaliasiamies). Wakiilka arrimaha sharciyada ee baarlamaanka (Eduskunnan oikeusasiamies) ayaa ilaaliya inay shaqaalaha maamulku dhowraan sharciyada. Isaga ayaana loo dacwoon karaa oo arrinta loo sheegi karaa.